Abdii boruu -
Tag Archives: Abdii boruu
Imala qabsoo bilisummaaf godhamu keessatti bu’aa fi ba’ii hedduutu nama mudata .kana jechuun galii tokko yoo qabatan illee adeemsa ykn tobtaa irratti wal dhabuu …
Abdii Boruutiin Mirga namummaa kabajjiisuufis ta’ee bilisummaa dhaban deebisanii argachuuf qabsoon karaa nagaatiin godhamu filannoo (option) gaarii akka ta’u kun dhugaa waliigalaa ti. Haa …
OPDOn Tigraay keessatti Bixxilamuu Yaadachiisuun kun Qaama Dhaadannoo ‘LIKK ENASGEBACHUHALEN’ Dhihoo Kanaa ti
Boruu Barraaqaa irraa OPDOn gaafa bixxilamtee qabee seenaan isiin himataa baate ‘Kaaba Shawaa aanaa Darraa keessatti jaaramne’ kan jedhu ture. Haa tahu malee qondaalonni hangafni …
Abdii Boruutiin Ummanni keenya amma maal barbaada? 1-Dhaaba waa fiduu malee dhaaba seena fi hawwii itti himuu miti 2-Dhaaba waa godhu malee ka’aa jedhee kaasee …
Abdii Boruutiin Erga uummatni Oromoo gabrummaa Habashoota jalatti kufee kaasee hanga har’aatti qabsoon bilisummaa saba Oromoo bu’aa bayii meeqa keessa dabree akka har’a gaye seenaatu …
Abdii Boruutiin Dubbiin akka mata dureetti dhiyaate kun hiikni isaa mormisiisaa ta’uu mala. Maaliif yoo jedhame, manni hidhaa amma jiru tokko yoo …